Inona no jerena amin'ny Disney Plus? Sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra farany - Fialam-Boly
Inona no jerena amin'ny Disney Plus? Sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra farany
Disney plus dia mpandray anjara amin'ny tontolon'ny sarimiaina sy sary miaina. Ny sary avo lenta sy tsara kalitao miaraka amin'ny sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra mahavariana sy tsara fitondran-tena dia nahatonga an'i Disney ho iray amin'ireo sehatra fialamboly malaza indrindra. Saingy satria misy fandaharana amin'ny fahitalavitra maro sy sarimihetsika misy karazana karazan-karazany rehetra misy Disney Plus , mety ho sosotra ianao amin'ny zavatra hojerena ao amin'ny Disney Plus.
Noho izany, tonga izahay hanampy anao amin'ny valiny tsara indrindra hampahafantatra anao ny momba ny tsara sy ny mendrika mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika ao amin'ny Disney plus.
Inona no jerena amin'ny Disney Plus?
Sarimihetsika vitsivitsy no avo indrindra ka hatramin'ny hain'ny tsirairay momba azy ireo, ary somary mora kokoa ny manapa-kevitra momba ny drafitra amin'ny faran'ny herinandro hijerena sarimihetsika tsara. Saingy tsy mitranga foana izany. Indraindray ianao dia misavoritaka eo anelanelan'ny sarimihetsika maro ary avy eo dia mijery seho na sarimihetsika tsy mendrika hijerena anao.
Indraindray tsara ny seho ary koa ny sarimihetsika, saingy tsy afaka mifanandrify amin'ny karazana tsiro zarainao amin'ny sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra. Ka nanangona izahay a lisitry ny sarimihetsika tsara indrindra ary fandaharana amin'ny fahitalavitra hijerena ny Disney plus.
Tanisao ny sary mihetsika 13 sy fahitalavitra tsara indrindra hijerena ny Disney Plus:
1. Ny Simpsons
Ny Simpsons dia iray amin'ireo fandaharana amin'ny fahita fahita amin'ny Disney plus. Izy io dia manana lohahevitra mahatalanjona momba ny saina, ny traikefa nahafinaritra ary ny hatsikana.
Io no iray amin'ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra ambony indrindra, ka raha vaovao amin'ny tontolon'ny Disney ianao dia ity no tokony ho voalohany amin'ny lisitrao hijerena.
2. Elena avy any Avalor
Elena dia andriambavy Disney maoderina be isa indrindra. Manana fanjakana izay tadiaviny hanjakan'ny hatsaram-panahy sy ny fandriam-pahalemana izy, saingy miatrika izany amin'ny fahasarotana atrehiny mety tsy ho tanteraka.
Elena dia toetra amam-panahy. Izy dia mpiady, mpitarika ary andriambavy lamaody miaraka amin'ny fitafiana voaomana tsara. Ny fijerena an'i Elena of Avalor dia mendrika jerena foana.
3. Ilay Hulk tsy mampino
Iray amin'ireo andiana fihetsika mendrika indrindra hijerena ny Disney plus. Ny maherifo dia mitovy be amin'ny maherifo malaza amin'ny hetsika toy ny lehilahy vy.
Nisy fizarana roa ireo seho ireo, ary samy nampientanentana azy ireo ny mijery azy roa.
4. Timon sy Pumba
Ireo mpilalao ao amin'ny Timon sy Pumba dia manintona be. Manana olana kely izy ireo mandritra ny diany mamaky ala.
Saingy ny andiany iray manontolo dia manompo anao amin'ny traikefa manaitra sy manaitaitra.
Izy io dia momba ny tantaran'ny ankizy folo taona izay marani-tsaina matetika. Miezaka izy mitantana amin'ny fahendreny lehibe amin'ny alàlan'ny tontolon'ny olana sy ny olon-dehibe mahasosotra.
Noho izany, ny fijerena lehilahy hendry dia mety ho fialamboly tena mandrisika hanana.
6. Riandranon'i Gravity
Kambana roa no mitarika voalohany. Mikasa ny hanao vakansy any amin'ny tanàna iray any Oregon fantatra amin'ny hoe gravity gravity izy ireo. Miaina tranga hafahafa sy mahatsiravina izy ireo any.
Ny piraty any Karaiba dia manana faritra maro. Mahavariana ny mijery azy ireo satria manana fientanam-po, fihetsika, fiahiahiana ary fitiavana kely.
Izy io dia iray amin'ireo sarimihetsika malaza indrindra azonao jerena ao amin'ny Disney plus. Ny tantara dia mihodinkodina amin'ireo vondrona na andian-jiolahin-tsambo piraty izay manao iraka samihafa hanatanterahana azy.
8. Tantara Tantara
Sarimihetsika mahafinaritra sy malaza ny tantara an-tsehatra. Manana faritra maro izy io, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manana tetika mahafinaritra miaraka amin'ny vahaolana amin'ny fifandonana manaitra.
Navoaka voalohany tamin'ny 1995 izy io, ary ankehitriny dia tonga ny ampahany fahefatra toy ny Toy Story 4 tamin'ny taona 2019.
9. Ilay zazavavindrano bitika
Ny zazavavindrano kely dia tantaran'ny zazavavindrano mahafinaritra. Ny tantara dia mitohy amin'ny fifanarahana ataony amin'ny mpamosavy any an-dranomasina hihaona amin'ny andriana olombelona rehefa raiki-pitia taminy izy.
Io no lamaody eo amin'ireo tia Disney, indrindra ny zazavavy.
10. Manambady Poppins
Marry Poppins dia iray amin'ireo mpilalao mampientanentana sy tian'i Disney plus. Ny tantara dia momba ny lehilahy fantatra amin'ny anarana hoe Andriamatoa Banks, mitady mpitaiza ho an'ny zanany roa. Noho izany, nihaona tamin'ny vehivavy mangoraka Marry Poppins izy, ary nametraka feom-pitiavana sy fahasambarana vaovao manodidina ny olona rehetra ao amin'ny sarimihetsika izy.
Mendrika hijerena izy io tsy hoe satria manana drafitra tena tsara izy, fa satria afaka mianatra avy amin'ny toetra mampiavaka an'i Marry Poppins.
11. Lalao Avengers End
Saika ny rehetra mahalala ny momba ny Avengers, ary ny tapany farany dia ny lalao Avengers End no jerena eran'izao tontolo izao ary nahazo isa ho famoahana farany ny taona 2019.
Ny lalao famaranana ny mpamaly faty dia mihodina manodidina ny hevitra fa ny mpamaly faty rehetra dia tokony hiaraka hamonjy ny zanak'olombelona.
12. Iza no namolavola an'i Roger Rabbit
Misy toetran'i Toon Roger. Misalasala momba ny vadiny izy fa mety hifanambady amin'i Marvin hafa izy. Ka nanapa-kevitra izy fa tokony hanakarama mpitsongo ho an'ity raharaha ity amin'ny vadiny sy i Marvin.
Nefa maty i Marvin avy eo, ary nahazo ny fiampangana azy ho namono olona izy.
13. Ny feon'ny mozika
Tantara manafana tokoa mifototra amin'ny tena fiainan'ny Mpihira Vonn Trapp Family. Nojerena be dia be izy io, ary ny mpitsikera dia nahita hevitra tsara momba ity famotsorana tena tsara ity.
Disney Plus dia iray amin'ireo loharano manan-danja sy miely amin'ny fialamboly mampihetsi-po. Izy io dia manana karazany marobe izay ahitana fandaharana amin'ny fahitalavitra tsy manam-paharoa sy manaitra.
Indraindray dia sarotra ny manazava ny tenanao momba izay hojerena ao amin'ny Disney plus. Ny lisitra etsy ambony dia natambatra taorian'ny fikarohana antsipiriany momba ny fampisehoana tsara indrindra azonao jerena ao amin'ny Disney Plus hanana traikefa milamina sy mampiala voly.
5 safidy iMovie tsara indrindra ho an'ny Windows 10
Inona no jerena amin'ny Hulu? Ultimate Collection
mpamorona volamena mivantana xbox maimaim-poana
mijery sarimihetsika amin'ny aterineto maimaim-poana tsy misy SIGNUP
maty miakatra 4 hazo fijaliana mividy
fomba tsara indrindra hanovana ny youtube ho mp3
Lalao mpilalao 2 an-tserasera tsy voasakana